Tsidika · Septambra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Tsidika · Septambra, 2017
Janoary 2019 4 Lahatsoratra
Mey 2017 8 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Tsidika tamin'ny Septambra, 2017
Sary Avy Any Okraina : “Ny Baolina Kitra Tavoahangin-drano”
Eoropa Afovoany & Atsinanana 26 Septambra 2017
Tavoahangin-drano 2 litatra no ataon'ireo mpankafy baolina kitra tia karokaroka any an-Tendrombohitra Carpathian any Okraina ho baolina....
Mamerina Ny Lazany Ao Azia Afovoany I Steven Seagal , Ary Mampatahotra Ny Mety Ho Tohin'izany
Azia Afovoany sy Kaokazy 21 Septambra 2017
Misy ve ny sarimihetsik'i Genghis Khan izay manasongadina an'i Seagal ao amin'ny fantsona? Ndeha antenaina hoe tsia .
Fifindramonina, Fialokalofana sy Tanindrazana!
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Septambra 2017
Nanomboka tamin'ny revolisiona 1979, Iraniana an-tapitrisany no nandao an'i Iran noho ny antony isan-karazany ary nanomboka fiainam-baovao hafa tany amin'ity planeta ity. Bilaogera maro avy amin'ny anjerimanontolo no nizara ny antony nandaozan'izy ireo ny firenena.
Ny Riandranon'I Trafalgar Any Dominica
Karaiba 20 Septambra 2017
Iray amin'ireo toerana misarika mpizahatany indrindra any Dominica ny Riandranon'i Trafalgar, indrindra ho an'ireo mpizahatany mandeha sambo fitsangatsanganana......
Sary Avy Any Azia Atsimo
Azia Atsimo 19 Septambra 2017
Nanapa-kevitra ny handeha lavidavitra kokoa aho hanaovana ny lahatsoratro voalohany tato amin'ny Global Voices ary hizaha ny zana-kaontinanta amin'ny alalan'ny fomba fijerin'ny hafa. Miraondraona miaraka amin'ny resaben'ny fakantsary sy ny fitselatry ny 'flash' ireo bilaogin-tsary any Azia Atsimo;
Ny Fifamoivoizana Any Vietnam
Azia Atsinanana 18 Septambra 2017
Mety ho nofy ratsy ho an'ny sambany mitsidika an'i Vietnam ny fifamoivoizana. Na mino izany ianao na tsia, manana ny lalànany ny fitaterana kanefa tsy liana amin'ny fanarahana azy ireo ny olona. Efa mahazatra ny mahita ireo olona telo na efatra mitaingina moto iray.
Vaovao Farany Ao Amin'ny Tontolon'ny Bilaogy Poloney
Eoropa Afovoany & Atsinanana 14 Septambra 2017
Efa nanontany tena ve ianao hoe andro inona eo amin'ny fiainan'ny olona iray monina any Polonina no mitovy amin'ny lahatsary maharitra 10 minitra? Tsy nahafantatra koa aho raha tsy tonga tany Polonina.
Siria Hita Amin'ny Fakantsarin'ireo Bilaogera
Syria 12 Septambra 2017
Ny fitetezana ireo rohy amin'ny tsanganana havanana ao amin'ny bilaogin'izy ireo dia toy ny fanaovana fivahinianana mahafinaritra itetezana ireo arabe, tendrombohitra, ireo morontsiraka sy ireo tany hay ao Siria.
Tonga Amin'ny Faran'ny Lalina ny Media Sosialy Amin'ilay Hetsi-panoherana Milomano 30 Km Miainga Eo Tobago Mankany Trinidad, Nokarakaraina Mpanao Politika
Karaiba 01 Septambra 2017
"Tsy afaka hanome fitaovana na fiantohana amin'ny karazan-javatra atao an-tsitrapo toy izao ny Mpiandry Morontsiraka amin'izay fotoana izay."
Ireo pejinay momba an i Tsidika
Fizahantany, Tsangatsangana, Vezivezy